कुन प्रदेशमा कति संक्रमित भेन्टिलेटर र आईसीयूमा छन् ? - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » स्वास्थ्य » कुन प्रदेशमा कति संक्रमित भेन्टिलेटर र आईसीयूमा छन् ?
२०७८ श्रावण १२ गते ०७:५२ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम । नेपालमा हाल १६६ कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । सातवटा प्रदेशमा १६६ संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको हो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले ६६९ संक्रमितको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा तयारीमा [...] Next
रवीन्द्रको प्रस्तावमा डा. भट्टराईले भने–‘गणतन्त्रविरूद्ध [...]